कांग्रेसले तोक्ला त महाधिवेशनको नयाँ मिति ?
काठमाडौं। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बस्ने भएको छ। बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक केही नेताहको पिसिआर रिपार्ट नआएकोले शुक्रबार सारिएको कांग्रेसले जनाएको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज दिनको १ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिए।
बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका,सरकार विरुद्द विरोध प्रदर्शन लगायतमा छलफल हुने बताइएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक लगातार सर्दै गएपछि १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे कांग्रेसले टुंगो लगाउन सकेको छैन। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न लगातार भइरहेका छलफलबाट सहमति नजिक पुगेकाले पनि आज बैठक बस्न लागेको कांग्रेस नेताले बताएका छन्।
क्रियाशील सदस्यता, गठन भएका विभागहरुको खारेजी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुले अधिवेशन नगरी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नपाउने, महाधिवेशनको सुनिश्चिततालगायत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले बुझाएको १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रको सम्बोधन भएपछि मात्रै केन्द्रीय समिति बस्ने पौडेल समुहको अडान छ। यसैकारण पटक पटक मिति तोकिएर पनि काँग्रेस केन्द्रीय समिति बस्न सकेको छैन्।
यसअघि पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुसहित सातपटक सम्म बसेको बैठकले पौडेल समूहले उठाएको अधिकाश विषयहरु सम्बोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो। बैठकले महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
विभाग, क्रियाशील सदस्यता वितरण, संगठन समायोजन, भ्रातृ संस्थाको पदावधि, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिलगायतमा पार्टीभित्र विवाद छ।